Chaayinaan Kutaa Zinjiyang keessatti duula “Farra Halaalaa” jechuun moggaaste jalqabde - NuuralHudaa
Chaayinaan Kutaa Zinjiyang keessatti duula “Farra Halaalaa” jechuun moggaaste jalqabde
On Oct 10, 2018 12
Mootummaan Chaayinaa yeroo adda addaa sababa finxaalessummaa ittisuu jedhuun Seerotaa fi qajeelfamoota muslimoota biyyattii cunqursan baasuun raawataa kan ture yoo tahu, ammas muslimoota Wiigar irratti xiyyeeffatuun duula “Farra Halaalaa” jechuun moggaase kan jalqabe tahuu Rooytars gabaase.
Qondaaltonni Paartii Koministii Chaayinaa biyyattii bulchaa jiruu, duula kana raawwachiisuudhaaf Kaadiroota kumaatamaan lakkaahaman magaalaa guddoo kutaa Zinjiyang tan taate Urumqi keessatti leenjisuun, Isniina dabre kan eebbisiisan tahuun beekameera. Sirna eebbaa kana irratti kaadiroonni leenjifaman “duula farra halaalaa injifannoon xumuruudhaaf ni qabsoofna” jechuun dirqama kan fudhatan tahuu gabaasichi ni ibsa.
Kaadiroonni duula kana raawwachiisuuf leenjifaman nyaataa fi dhugaatii jiraattota naannichaa too’achuuf mirgi kan kennameef yoo tahu, hojjattoonni mootummaa Khamrii fi nyaata halaala hin tahin yoo kan didan tahe kan adabaman tahuu ibsame. Dabalataanis miseensonni Paartichaatii fi hojjattoonni mootummaa Diinii isaanii akka hin hordofne qajeelfamni bahee jira.
Chaayinaan muslimootni biyyattii Diinii akka hin hordofneef duula hamaa geggeessa jirtuun walqabatee, yeroo ammaa muslimoonni miiliyoona tokkoo fi walakkaa tahan manneen hidhaa keessatti kan ugguraman tahuu gabaasni dhiheenya UN irraa bahe ni addeessa.